Sida loo bixiyo canshuurta ee Maraykanka qaxooti ama soo galootiga | Refugee Center Online
Taxes are amounts of money people contribute to the costs of running a country or community. Tusaale ahaan, canshuurta bixiyo dugsiyada, isbitaalada, and roads.When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.
Waa maxay canshuurta?
canshuurta A waa xaddi lacag ah aan ku bixino dawladaha. Dowladaha ka mid ah dowladda federaalka, dawladaha gobolka, oo yar yar ah, dawladaha hoose in ay maamulaan gobollada iyo magaalooyinka. Haddii aad shaqaysato lacag, lacag ku qaataan, ama ku leedahay guri America, waxaad bixin doontaa cashuurta ka mid ah nooc ama mid kale. Waxaa muhiim ah in la fahmo sida loo bixiyo canshuurta jidkii toosnaa,.
Waa maxay canshuurta dakhliga?
canshuurta dakhliga waa canshuurta dakhligaaga (waxa ku soo galo ama helaan sanad kasta). Dadka waxay bixiyaan canshuurta dakhliga ee dawladda federaalka ah iyo dawladaha gobolka ugu. (gobolada qaarkood, sida New Hampshire iyo Florida, ha ka qaadaan cashuurta dakhliga.) canshuurta dakhliga ee dawladda dhexe waxaa loo ururiyaa by Laanta Canshuuraha Gudaha (IRS) iyo in uu aado Maraykanka. canshuurta dakhliga State aado sheegtaa waaxda dakhliga.
heerka, ama lacagta, cashuurta dakhliga ee aad bixiso waxay ku xiran tahay sida aad u kasban yahay iyo kharashyada yihiin. Dadka kasban ama hesho lacag badan oo dheeraad ah ku bixiyo cashuurta ka badan dadka qaata lacagta yar.
Waxyaabaha kale ee saamayn inta aad bixiso. Haddii aad leedahay carruur, waxaad ka heli credit a canshuurta waaweyn in ay kaa caawiyaan kharashka korinta qoyska. credit canshuurta A macnaheedu waa in aad bixiso canshuur ka yar dakhligaaga.
Getting married can affect how much tax you pay, aad. dadka Single hesho credit a hoose canshuurta ka badan laba isqaba, si ay u bixin kartaa canshuur dheeraad ah. Laakiin lamaane is qaba oo waa kan labada shaqo wada bixin kartaa canshuur ka badan marka ay ahaayeen hal.
Sidee baan u xareyso canshuur ah?
Sanadkasta, shaqaalaha iyo shirkadaha ay leeyihiin si ay u xisaabiso dakhliga sanad ka hor. Kolkaasay waxay ku xisaabiso inta canshuur lagugu leeyahay iyaga iyo tirooyinka ay dowladda soo diri. Nidaamkan waxaa loo yaqaan “filing a tax return.” Dad badan ayaa horay u bixisay canshuurta ay by waqtiga ay fayl ay canshuur celinta. Tani waa sababta oo ah lacagta cashuurta waxa laga soo qaatay jeegagga mushaharka si joogto ah ay ka hor inta aysan lacag. Mararka qaarkood, canshuur celinta muujiyaan laga yaabaa in aad hore u bixisay canshuur aad u badan, iyo xukuumadda aad ku leedahay celiyo!
Ma u baahanahay inaan u xareyso canshuur ah?
Haddii lagugu leeyahay ama canshuuraha dowladda aad ku leedahay, it is your responsibility to know when and how to pay taxes . You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. Waxaad soo diri doonaa in aad canshuur celinta foomkan ku daabacan dowladda. Foomka waxaa aad u dheer oo weydiiso badan oo faahfaahin ku saabsan dakhligaaga iyo kharashyada.
Sidee baan u heli caawimo bixinta canshuurta?
Haddii aad haysato waqti adag fahamka sida loo bixiyo canshuurta, ha ka welwelin. Waxaad heli kartaa gargaar. ururada bulshada iyo dib u dejinta badan ayaa bixiya kaalmo. Haddii aad tahay qaxooti dhawaan dib u dejin, caawimaad weydiiso ee xafiiska dib u dejinta.
xitaa haddii aadan tahay qaxooti, dowladda leedahay barnaamijyo si ay u caawiyaan dadka u baahan. The Assistance Volunteer Income Tax (VITA) barnaamij offers free tax help to people who earn $54,000 sano ama ka yar, inay dadka naafada ah, iyo dadkii la Ingiriisi kooban. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. meelo badan ayaa bixiya ee Spanish caawimo, Carabi, luqadaha Chinese iyo kale.
Buuxinta canshuur celinta online
Haddii aad jeceshahay in aad soo gudbiso aad canshuur celinta u gaar ah, waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo aad u isticmaali karto, oo ay ku jiraan mid ka mid ah kuwa ugu badan, Tax Turbo. Laakiin ha in aad bixiso Turbo Tax.
Waxaad sidoo kale si toos ah u tegi kartaa IRS Freefile website oo waxaa bilaabaya geedi socodka.